Fetsy 7 ho an'ny dia amin'ny fiara amin'ny ririnina | Vaovao momba ny dia
Fetsy 7 ho an'ny dia fiara amin'ny ririnina
Vaovao momba ny dia | | soso-kevitra, Tsangatsangana
Ankehitriny rehefa tonga ny hatsiaka dia tena zava-dehibe ho ampy fitaovana tsara raha mandeha fiara. Ny tafio-drivotra sy ny oram-panala dia sasany amin'ireo tranga lehibe tsy maintsy atrehana amin'izao vanim-potoanan'ny taona izao. Noho izany, raha ny dia ataonao dia ataonao, ilaina ny manisy antsipiriany vitsivitsy alohan'ny hiainganao mankany amin'ny toeran-kaleha:
1 Zahao ny tsiranoka tapaka
2 Zahao ny tsiranoka antifreeze
3 Zahao ny jiro
4 Mitondrà scraper
5 Fiantohana fiara
6 Mitondra lamba firakotra sy rano
7 Ny hafainganam-pandeha fanaraha-maso
Zahao ny tsiranoka tapaka
Rehefa mandeha ny fotoana dia reraka ity ranoka ity ary mety tsy dia salama tsara, noho izany dia ilaina ny manamarina sy manova azy mba hiasa tsara ny valin-drakitry ny fiara. Araka izany, hialantsika ny olana amin'ny toetr'andro ary tsy misy toetr'andro ratsy.
Zahao ny tsiranoka antifreeze
Io tsiranoka io matetika dia miova isaky ny roa taona. Ny antifreeze dia mahavita mamoaka ny hafanana avy amin'ny motera ary mitroka ny hafanana be loatra izay nanangona. Ireo fanovana ireo dia tsy maintsy atao satria ny fahombiazan'ity karazana ranoka ity dia miharatsy ihany koa rehefa mandeha ny fotoana, indrindra manoloana ny maripana ambany indrindra.
Zahao ny jiro
Ny famirapiratan'ny jiro rehetra dia mety tokoa, indrindra rehefa mitondra fiara amin'ny alina sy rehefa avy ny orana na ny oram-panala. Ny jiro amin'ny toe-javatra mahitsy dia hanampy amin'ny fisorohana karazana lozam-pifamoivoizana mety hitranga eny an-dalana noho ny tsy fahitana azy. Aza adino ny manamarina ny jiro zavona koa!
Tena ilaina raha mankany amin'ny faritra misy oram-panala ianao amin'ny ririnina. Miaraka amin'ny scraper dia azonao atao ny manala ny ranomandry voangona amin'ny volana sy ny varavarankely. Ny fananana sehatry ny fahitana mazava dia hanatsara ny fahitana antsika ary hanamora ny fitondrana fiara.
Ny tsy fandaozana ny trano raha tsy misy fiantohana nohavaozina ary miaraka amin'ny fandrakofana ilaina dia ilaina. Raha, ankoatr'izay, ny fepetra dia ratsy ary nijaly izahay, tena ilaina ny manana politikam-piantohana mamela anao hanatanteraka fomba haingana amin'ny Internet sy amin'ny toerana rehetra. Misy sehatra fiantohana maromaro manolotra an'ity serivisy ity ho an'ny mpanjifany. Raha manapa-kevitra ianao ohatra miantoka ny fiaranao amin'ny doppo, hanana fidirana avy hatrany amin'ny politikanao ianao, na amin'ny Internet na amin'ny fampiharana, mba hanao ny fanodinana rehetra ao anatin'ny minitra vitsy.
Mitondra lamba firakotra sy rano
Raha mandeha amin'ny ririnina ianao dia zava-dehibe ny fiomanana tsara manoloana ny hatsiaka. Ny fananana lamba firakotra dia hanampy hahatonga ny dia hilamina sy ho mora kokoa. Noho izany, raha simba ny rivotra amin'ny fiara na mila hafanana fanampiny ianao dia ho afaka hanana izay ilainy ny mpandeha rehetra. Ilaina koa ny fananana rano ampy amin'ny dia lavitra satria ny sorona tsy ilaina dia sorohina ary afaka manampy be amin'ny toe-javatra tsy ampoizina.
Ny hafainganam-pandeha fanaraha-maso
Tena ilaina ny tsy mihoatra ny hafainganam-pandeha, indrindra rehefa avy ny orana na ny oram-panala. Manoro hevitra anao ny tsy hisongona tampoka ary hampiasa paosy ambany. Mba hisorohana ny fihemorana dia zava-dehibe ihany koa ny manamarina ny toetoetran'ny kodiarana. Ny fananana kodiarana tsara indrindra sy ny tsindry marina dia manatsara ny fitoniana amin'ny faritra malama ary mampiroborobo ny asfalta tsara kokoa.
Ho fanampin'ireto toro-hevitra ireto dia ilaina ny miala sasatra tsara alohan'ny hanombohana ny dia, mitazona hatrany ny toetr'andro amin'ireo lalana, sorohy ny andro fitsangatsanganana bebe kokoa, ireo izay tsy ampy ny toetr'andro ary, farany, atolotra, ho fanampin'izay, tandremo Torohevitra momba ny vanim-potoana DGT Anisan'izany ny: mitondra kojakoja fanampiny, manamarina ny fiasan'ny solo-drivotra marina, ny fikojakojana ny fanadiovana fitaratra, ny fitaratra, sns. Kely ny fitandremana rehetra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Fetsy 7 ho an'ny dia fiara amin'ny ririnina
Mandehana mankany amin'ny Nosy Cook